Induction Heating Device ye-brazing, ukuncibilika, ukuhlanganisa, ukugoqa, njll.
Ikhaya / ukukhishwa kwezinga eliphezulu lokushisa / Induction Ukushisa Idivayisi
Isigaba: ukukhishwa kwezinga eliphezulu lokushisa Tags: thenga ukufudumeza idivayisi, high heater frequency, uhlelo lokushisa okuvame kakhulu, high frequency ukufakwa ukushisa idivayisi, idivayisi yokushisa engenayo, Ukukhishwa kwe-induction, Ukushisa ukufakelwa, ukufakwa kwesicelo sedivayisi yokushisa, ukufakwa kwentengo yedivayisi yokushisa, amadivayisi wokushisa wokungeniswa, i-induction heating generator, ukufakwa kokushisa uhlelo
Induction Ukushisa Kwedivayisi
I-HLQ Induction Heating Machine Co ikhiqiza izinhlobo eziningi ze- izimpahla zedivayisi yokufudumeza kufaka phakathi uchungechunge lwamandla omvamisa ophezulu, uchungechunge lwamandla omvamisa ophakathi, uchungechunge lwamafilimu e-ultrahigh ukushisa, ukushayela, ukwakha, ukuqubuka, ukubopha, ukukhwelisa, ukuqina nokuqina kwezokwelapha kanye nokufakwa esikhundleni.
Imodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe bokushintsha obushintshayo bufana nasekukhiqizeni i-generator, ukuthembeka okuphezulu kungenziwa.
Okuncane futhi okuphathekayo, uma kuqhathaniswa nomshini olawulwayo we-SCR kuphela isikhala sokusebenza se-1 / 10 sidingeka. Ukusebenza okuphezulu ukugcina amandla, ukusebenza kahle kanye namandla kude kungagcinwa
I-generator iyavumelana nezimo ebangeni elikhulu lemvamisa kusuka ku-1KHz kuye ku-2.0MHz, ukufakwa kungenziwa kalula ngokusho kwebhukwana lethu.
Umjikelezo we-100%, umsebenzi oqhubekayo wokusebenza ngamandla.
Amandla okuqhubekayo noma imodi yokulawula i-voltage njalo.
Ukuboniswa kwamandla okukhipha, ukukhishwa kwemvamisa, nokuphuma kwamandla.
Umbono wedivayisi yokushisa engenayo
Kulawa madivayisi wokushisa wokungeniswa, kusetshenziswa uchungechunge lokujikeleza okushintshashintshayo, ngokusebenzisa i-high frequency transformer, i-voltage ephansi namandla aphezulu wamanje okukhiphayo ukuhamba ngekhoyili yokungeniswa.
Imishini yochungechunge lwe-DW-HF-15KW ne-DW-HF-25KW iyizinhlobo zokuqala ezakhiwe enkampanini yethu, zisebenzisa izinto ze-MOSFET ne-IGBT kanye nobuchwepheshe bethu bokulawula isizukulwane sokuqala, imishini ifakwa ngesakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu nentengo ephansi, futhi kulula ukuzisebenzisa nokulungisa, futhi manje sekuyimishini esetshenziswa kakhulu eChina nakwamanye amazwe.
Kochungechunge lwe-DW-HF-35KW ne-DW-HF-45KW Ukushisa ukufakelwa kusetshenziswe imishini, imodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe besizukulwane sethu sesibili sokupheqa ukulawula ubuchwepheshe, lokho kungukulawula okubili nokuguqula ubuchwepheshe. Kobu buchwepheshe obusha, amandla okukhipha nobuningi obujikelezayo balawulwa ngokuzimela. sisebenzisa izinto ze-IGBT kanye nemvamisa ephezulu yokulawula isekethe yokulawula ukulawula amandla futhi sisebenzisa izinto ze-IGBT, uchungechunge olujikelezayo nokulandela umkhondo okuzenzakalelayo ukuze kufinyelele ekushintsheni okuthambile enkambweni yokuguqula, konke lokhu kwenza umshini uthembeke kakhulu futhi wenze umshini ukwazi ukwenzeka ukusebenza ngokuqhubekayo nomjikelezo womsebenzi ongu-100%.
Uma kuqhathaniswa nemishini enobuchwepheshe besizukulwane sokuqala, ubuchwepheshe besizukulwane sesibili bufaneleke kakhulu imishini yamandla emikhulu ukuthola ukuthembeka okuphezulu.
Ngenxa yokwamukelwa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe, imishini yochungechunge lwe-DW-HF-35KW ne-DW-HF-45KW icindezelwa ibanga elikhulu lemvamisa, usayizi omncane, isiguquli samanzi esenziwe amanzi, ukuthembeka okuphezulu nezindleko zokukhanda eziphansi.
Ngaphakathi kochungechunge lwe-DW-HF-70KW induction lokushisa idivayisiKusetshenzisiwe imodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe besizukulwane sesithathu besebenzisa ukulawula ubuchwepheshe, lokho ngukulawula okuthambile nokumbili nobuchwepheshe bokuguqula. Kulobu buchwepheshe, amandla wokukhipha kanye nobuningi kungalawulwa futhi kulungiswe ngokwehlukana, imodyuli ye-IGBT nobuchwepheshe bokulawula ukushintsha okuthambile kusetshenziswa kumjikelezo wokushintsha imvamisa ephezulu ukulawula amandla okukhipha. Kwisifunda sokuguqula, i-IGBT kanye nokulandela umkhondo wemvamisa kuyasetshenziswa ukufeza isivinini esikhulu nokulawula okunembile kokushintsha okuthambile. Ukwamukelwa kobuchwepheshe obusha akugcini nje ngokuthuthukisa ikhwalithi nokuthembeka komshini, kepha futhi kuxazulula inkinga yobuchwepheshe kumandla amakhulu umshini wokufudumeza lokungeniswa futhi kwenza kube nokwenzeka ukusebenza umjikelezo womsebenzi ongu-100%.